फलफूल र तरकारीबाट कोरोना सर्दैन, पैसामा ४ दिनसम्म रहन सक्छ – Swasthya Samachar
डा लुना भट्ट, भाइरोलोजिष्ट/
कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगिन मास्क, सेनिटाइजर र भौतिक दूरी सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हुन्।मास्क लगाउँदा कसरी लगाउने भनेर हामी होसियार हुनुपर्छ। कसैले हातमा मास्क लगाउने, चिउँडोमा लगाउने अथवा कानमा लगाउने गर्छन्, यो एकदमै गलत हो।
मास्क लगाएको छ तर भीडभाडमा धेरैबेर बसेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा मास्कले मात्रै संक्रमण रोकिँदैन। मास्क लगाएको भए पनि धेरै समय भीडभाडमा बस्न हुँदैन।जतिखेर पनि साबुन पानी उपलब्ध नहुने भएकाले स्यानिटाइजर गोजीमा राखेर हिँड्नुपर्छ। पैसा वा अन्य सामान चलाउँदा स्यानिटाइजर दल्नुपर्छ। कहीँ पनि बस्दा स्यानिटाइजर भएको टिस्यु पेपरले पुछेर बस्नुपर्छ।
कुन सामानमा भाइरस कति समय बस्छ ?
त्यही भएर एउटा मास्क धेरै दिन लगायो वा जथाभाबी लगायो भने संक्रमण हुन सक्छ। साबुन पानीले हात धुनु राम्रो हो।नोट र कपडामा भाइरस भए पनि त्यसबाट हाम्रो नाकमा छिर्‍यो भनेमात्रै भाइरसले आक्रमण गर्ने हो। त्यही कारणले हात धुने र मास्कले नाक मुख छेक्नु पर्छ भनेको हो।
आँखामा पनि भाइरसको असर हुन्छ। भाइरस आँखामा गयो भने संक्रमण हुन्छ, जसले गर्दा आँखा पाक्ने, चिलाउने हुनसक्छ। आँखाबाट श्वासप्रश्वास प्रणालीमा भाइरस गएर कोभिड संक्रमण हुँदैन। यो रोग कानबाट सर्दैन। मुख्य रूपमा नाकबाट सर्ने हो। खाएको खानेकुराबाट भाइरस सर्दैन।
कोरोनाको यही लक्षण हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। धेरैलाई ज्वरो आउने, सुक्खा खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने हुन्छ। योबाहेक कसैलाई झाडापखाला र वाकवाकी पनि लाग्न सक्छ। मान्छे अनुसार फरक(फरक लक्षण देखिने भएकाले यसै भन्न सकिँदैन।
फलफूल र तरकारीमा भाइरसको असर हुँदैन ?
सकेसम्म बाहिरको प्लाष्टिकलाई घरभित्र प्रयोग नगरेकै राम्रो हो।दूधमा पनि यो भाइरस रहँदैन। दूध उमालेरमात्रै खाने भएकाले पनि डराउनु पर्दैन।
कार्यालयमा धेरै भीड नगरौं, एक(अर्कासँग गफ पनि नगरेकै राम्रोयस्तो बेलामा भीडभाड हुने कार्यालयमा सबैभन्दा धेरै खतरा छ। धेरै थरीका मानिस आउँछन्। कोरोना लागेका सबैलाई ज्वरो आउँछ भन्ने छैन। ज्वरो छैन भन्दैमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण छैन भन्ने पनि हुँदैन।
त्यस्तै कार्यालयमा बाहिरका मान्छेलाई पनि जथाभाबी आउन दिनु हुँदैन।कार्यालयमा कर्मचारीलाई थोरै बोल्न लगाउनु पर्छ। दूरी कायम गर्ने अनि हाँस्ने, बोल्ने हो भने बाहिर गएर खुला ठाउँमा गर्नुपर्छ। कार्यालयमा बसेर गफिने बानी हटाउनु पर्छ। एउटा व्यक्तिले प्रयोग गरेको टेबुल, कम्प्युटर अरूले चलाउनु हुँदैन किनकी टेबुलमा हात राखिन्छ र कुर्सीको छेउमा कम्प्युटरको किबोर्ड माउसमा पनि हात गइरहेको हुन्छ। एउटै व्यक्तिले चलाउँदा यसलाई बेलाबेलामा डिसइन्फेक्सन गर्नुपर्छ।
काम गर्दा प्रयोग हुने कुर्सी, टेबुल र कम्प्युटरलाई सकेसम्म एकै दिनमा पटक(पटक डिसइन्फेक्सन गर्नुपर्छ। दिनमा एक पटक त गर्नैपर्छ।
सकेसम्म पैदल हिँडेको राम्रो ?
दोस्रो साइकल र मोटरसाइकल हो। खुल्ला हावाबाट यो रोग सर्दैन।प्राइभेट गाडी एक्लैले चलाएको छ भने धेरै जोखिम हुँदैन। त्यसैले सकेसम्म आफ्नो गाडी आफैंले चलाएको राम्रो हो। गाडीबाहिर टल्काउने भन्दा पनि गाडीको भित्री सफाइमा ध्यान दिनुपर्छ। परिवारसँग जानु पर्‍यो भने पहिलाजस्तो धेरै जना बस्नु हुँदैन। गाडीमा ठाउँ खाली गरेर राख्नुपर्छ। सकेसम्म बाहिरका मानिस राख्नु हुँदैन। गाडीमा एसी चलाउनभन्दा झ्याल खोल्नु राम्रो हो। एसी चलाउदा पनि नन रिसर्कुलेट मोडमा राख्नुपर्छ।
सबैभन्दा डर ट्याक्सीमा हुन्छ। चालक संक्रमित होला, नहोला तर त्योबाहेक यात्रु पछाडीको सिटमा बस्नुपर्छ। अनि चालकले पनि भित्र सफा गर्नपर्छ। ट्याक्सीमा बस्दा गफ गर्न र फोन गर्नु हुँदैन। मिल्छ भने ट्याक्सी चालक र पछाडि बस्नेको बिचमा ुब्यारियरु राख्नुपर्छ। कोरोना महामारी कहिलेसम्म जान्छ भनेर टुंगो नभएकाले सबै ट्याक्सीमा चालक र यात्रुको बीचमा प्लाष्टिकले छेक्नुपर्छ ताकी एक अर्कालाई भाइरस सर्न नपाओस्।
रोग प्रतिरोधी क्षमताले कोरोनाबाट जोगाउने होइन ?
नेपालीको रोग प्रतिरोधी क्षमता बढी छ त्यसले हामीलाई बचाउँछ भन्ने भ्रम पनि अब तोडिइसकेको छ।कतिपय रोगमा यो क्षमता हुनु राम्रो हो तर यो भाइरसको हकमा यस्तो पाइएको छैन।
यो भाइरसको कारणले रोग प्रतिरोधी क्षमता परिवर्तित भएर, धेरै सक्रिय भएर बिरामीलाई असर गरेको पनि देखिएको छ। यो भाइरसको कारणले रोग प्रतिरोधी क्षमताले असामान्य काम गर्ने खतरा हुन्छ। जसले गर्दा हृदयघात, किड्नीलगायत अन्य अंग फेल हुने मस्तिष्कमा समस्या पर्ने, रगत जम्ने र अकस्मात मृत्यु हुनेलगायत खतरा पनि देखिएका छन्।
दाल भात र हावाले यो रोगलाई ठिक पार्छ भन्नुमा सत्यता छैन। किनकी भएको सामान्य रोग प्रतिरोधी क्षमताले यसमा काम गर्न सक्दैन। भाइरसले रोग प्रतिरोध प्रणालीमा असामान्य अवस्था उत्पन्न गराएर थप असर देखिएको छ।
तातोपानी, बेसार खाएर केही अर्थ छैन। यसले अन्य खालका रूघा, घाँटी खसखस गर्नेजस्ता समस्यालाई ठिक पार्छ होला तर कोरोनाभाइरसको संक्रमण निको हुँदैन। यसको सबैभन्दा ठूलो उपचार भनेकै आफू सुरक्षित रहने हो। हाल उपलब्ध एन्टिभाइरल औषधी र इम्युनोमोडुलेटर प्रयोग गरी उपचार गर्नुपर्छ।
डाक्टर लुना भट्टले जापानको ओशाका सिटी विश्वविद्यालयबाट भाइरोलोजीमा पिएचडी गरेकी हुन्।
डाक्टर लुना भट्टले जापानको ओशाका सिटी विश्वविद्यालयबाट भाइरोलोजीमा पिएचडी गरेकी हुन्। उनीसँग सेतोपाटीका सन्जिब बगालेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।